Thai Nepal News:: ‘ओल्लो खोलो पल्लो खोलो’ गीतका गायक रबिन सुब्बाको आफ्नो देशको भबिष्यप्रतिको परिकल्पना कस्तो छ त ?
‘ओल्लो खोलो पल्लो खोलो’ गीतका गायक रबिन सुब्बाको आफ्नो देशको भबिष्यप्रतिको परिकल्पना कस्तो छ त ?
विभिन्न दलका नेताहरुले आ-आफ्नै ढंगबाट नेपाली जनताको चाहनाको परिभाषा फरक फरक गर्दै आएका छन् । एउटै देशका त्यही जनताले किन पार्टी पिच्छे फरक फरक चाहना र अनि नेता पिच्छे फरक फरक दृष्टिकोण किन राखेका होलान् ? अनि जनताको चाहनाको बहानामा कयौँ पार्टी स्थापना भए अनि कयौँ नेताहरु निर्माण भए यद्यपि आजसम्म किन जनताको चाहना सबैले बुझेका छैनन्, अनि हामी अत्यन्त लोकप्रिय पार्टी भनेर आफुलाई दर्ज गर्न खोजे पनि किन नेपालको समृद्धि कहिल्यै हुन सकेन ? अनि नेपाली काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजबाद, नेकपा एमालेको बहुदलीय जनबाद, माओवादीको प्रचण्डपथ लगायतका धेरै सिद्धान्तहरुको परिक्षण गरिरहँदा सबै पार्टीहरुले आफ्ना सिद्धान्त जति उत्कृष्ट अरु कुनै छैन भनी एक अर्कालाई सत्तो सराप गरि नै रहे यद्यपि किन कुनै सिद्धान्तले पनि नेपालको विकास नभएको हो ? जनताले खोजेको के रहेछ आखिरमा र खोजेको किन पाएनन् ती जनताले । यसको उत्तर एउटा अभियानकै रुपमा खोज्ने जमर्को गर्दैछ थार्इनेपालन्यूज परिवार ।
यसैक्रममा राष्ट्रलाई माया गर्ने र देशको बिकास गर्नकालागी सकरात्मक धारणा भएका तथा ‘ब्रदर्स हेल्प लाइन(BHL)’ नामक सामाजिक संस्थाका सक्रिय सामाजिक अभियानता साथै गीत संगीतको क्षेत्रबाट चिनिन सफल लोकप्रिय पुर्बेली गायक रबिन सुब्बा ज्युसँग गरिएको महत्वपुर्ण कुराकानी ;
(१) तपाई लोकप्रिय पुर्बेलि गायक हुनुहुन्छ, तपाइको पहिलो एल्बमको बारेमा केही भन्दिनु होस्न ?
– सर्वप्रथम धन्यवाद ! मेरो पहिलो एल्बम ‘हाम्रो रहर’ हो । यो एल्बम चाहिँ आधुनिक गजल एल्बम हो । त्यस्मा भएका गीतहरूमा ‘ओल्लो खोलो पल्लो खोलो कमिलाको गोलो भनेर’ भन्ने गीत पनि रहेको छ ।
(२) गायन क्षेत्रमा यात्राका क्रममा धेरै संघर्ष गर्नु भयो, तर फेरी बिचमा कतै हराउनु भयो, किन होला ?
– साँच्चै नै धेरै दुख गरे मैले त्यत्ती खेर । गीत संगीतमा त्यहीँ त हो संघर्ष बढी प्रतिफल कम । त्यस्मा पनि म निम्नबर्गको मान्छे गीत मात्रै गाएर भबिष्य नचल्ने देखेर परदेश तिर लागे त्यही कारण पनि म ओझेल परेको हुँ।
(३) तपार्इको गायन क्षेत्र बाहेकको ब्यक्तिगत जीवन कसरि चलिरहेको छ र हाल कता हुनुहुन्छ ?
– गीत संगीत बाहेक म अटो इलेक्ट्रीसियन हुँ । त्यही कामको शिलशिलामा हाल साउदीअरब को रियादमा कार्यरत छु ।
(४) आगामी दिनमा के गर्ने बिचारमा हुनुहुन्छ ?
– गीत संगीतलाई निरन्तरता दिने बिचारमा छु ।
(५) एक सफल व्यक्तित्व हुन कस्ता कुराहरु अपनाउनु पर्छ, तपाईको बिचारमा ?
– मेरो बिचारमा सफल हुनकोलागी सबैभन्दा पहिलो कुरा चाँही मान्छेमा धैर्यता अनि निरन्तरता हुनुपर्छ ।
(६) अब तपाईलाई आफ्नो देश तथा राजनीति सम्बन्धि प्रश्न गर्दै छु । अहिलेको अस्थिर राजनीतिक अवस्था हेर्दा, नेपालीलाई कस्तो नेता र पार्टीको आवश्यकता छ ?
– म कुनै पार्टीसँग आबद्ध त छैन, तर मेरो बिचार राख्नु पर्दा, त्यस्तो नेता होस् जो देशको माया गर्ने जनताको चाहना बुझ्ने खाल्को होस् । अनि पार्टी पनि आफ्नो स्वार्थ र माग पुरा गर्ने भन्दा जनता अनि देशकै हितका लागी बनेको होस् ।
(७) नेपालको बिकास हुन नसक्नुमा कस्को दोष ठान्नुहुन्छ ? अन्य मुलुक, नेताहरू वा जनता स्वयम् र किन ?
– देशको बिकास नहुनुमा बाहिरी देशलाई मुख्य दोष दिनु भन्दा पनि पहिलो दोष त नेतालाई नै जान्छ, किनभने देशको जिम्मा लिएर कार्यभार सम्हालेका नेताहरुमा अलिकत्ती देशको लागी चिन्ता लिएको अहिले सम्म देखिएन । खाली आफ्नो कुर्सीको बचाउ गर्न मै उनिहरुको समय अबधी सकाएको देखियो । संसद भित्रै कुटाकुट, हानाहान गर्ने ‘बच्चा’ नेताहरु अन्तरिक रुपमा नै दह्रो छैनन् भने बाहिरी शक्तिले दाउ छोप्नु सामान्य कुरा हो । त्यसपछि हामी जनता पनि दोषीमा पर्छौँ किनकी हामीले कहिले पनि राम्रोलार्इ होइन हाम्रोलाई चुनाबमा जितायौँ ।
(८) प्राय युवाहरू अहिले बैदेशिक रोजगारमा आकर्षित हुँदै बिदेश पलाएन हुने गर्दछन् , यस्को मुख्य कारण के हुन सक्छ र बाहिरिनेको संख्या कम गर्न सरकारले के गर्न जरूरि छ ?
– कुनै पनि युवा बिदेशतिर आकर्षित भएका होइनन् । यो सबै देशको जर्जर स्थितीले गर्दा बाध्य भएर बिदेश पलायन भएका हुन् । यसलाई रोक्न मुख्यत: देशमा स्थायि शान्ती अनि रोजगारिको निश्चितता हुनुपर्छ ।
(९) तपाई प्रधानमन्त्री हुनु भयो भने सर्वप्रथम नेपालका लागि ५ वटा महत्वपूर्ण काम के के गर्नुहुनेछ ?
१. म प्रधानमन्त्री भए भने, प्रथमत: युवालार्इ विदेश पलायन हुनबाट रोक्छु र नेपाल मै रोजगारीको अवसरहरू प्रदान गर्छु ।
२. तराईको भूभागमा मिची रहेको सिमा सम्बन्धि समस्यालाई समाधान गर्नतिर लाग्छु, किन भने देशको भूभाग नै नरहे हामी कहाँ रहन्छौ र ।
३. देशमा स्थायी शान्तीपुर्ण तथा बन्द हड्ताल मुक्त देश बनाउन पहल गर्नेछु ।
४. आफु विभिन्न देश भ्रमण गर्दा सरकारको ढिकुटीबाट हुने खर्चलार्इ देशमा दिगो बिकासको योजनाहरू ल्याइ त्यस्ता योजनाहरूमा लगाउँछु ।
५. अनि नेता, मन्त्री जस्ता सरकारका ठुला मान्छेको लागि मात्र नभई कानुन सबै जनताको लागि हुने गरि मजबुत र समान किसिमको बनाउँछु ।
(१०) तपाई कुनै पार्टीको कार्यकर्ता अथवा नेता नभई एउटा नागरिकको हैसियतमा देशको सम्वृद्धिको लागि गर्नु भएको कुनै योगदानको वारेमा बताइदिनु हुन्छ कि ?
– एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो । यो देशको सँधै उन्नती अनि हामी जस्तै सबै जनता सुखी साथै सवै शिक्षित भएको देख्न चाहान्छु । त्यही चाहना भएर नै हामी नेपाली दाजुभाइ मिलेर साउदीमा एउटा ‘ब्रदर्स हेल्प लाइन(BHL)’ नामक संस्थाको स्थापना गरेका छौँ, । जुन संस्थाले अत्ति बिपन्न गरिब तथा असाहाय बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्दै आएको छ । यहि संस्थाको मध्यमबाट मैले पनि समाजसेवा गर्ने मौका पाएको छु । यो हाम्रो सानु प्रयासले पनि देशकोलागी केही योगदान दिन सक्छौँ कि भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ ।
(११) अन्त्यमा थाइनेपालन्युज डट कम पढ़नुहुने सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– अन्त्यमा मेरा कुराहरु राख्ने मौका दिनु भएकोमा थाईनेपालन्यूज डट कम परिवारलाई धन्यबाद दिन चाहन्छु । अनि तपाई साथै थार्इनेपालन्यूज परिवार र थार्इनेपालन्यूज पढ्नु हुने सम्पुर्ण पाठकमा आउँदै गरेको बिजय दशमी तथा शुभ दिपावालीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना दिन चाहान्छु । साथै ताजा अनि निश्पक्ष समाचार दिने थार्इनेपालन्यूज डट कम पढ्ने बानी बसालौँ भन्न चाहन्छु । धन्यवाद !